Sida loo wanaajiyo Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo waxyaabaha laga helo Stacer | Laga soo bilaabo Linux
Tayadoow, Nadiifi oo Muuji waxqabadka iyo adeegsiga qalabkeenna, waa mid ka mid ah shaqooyinka aan dhammaanteen sida joogtada ah u qabanno, kuwa doorbida inay adeegsadaan isdhexgalka garaafka oo meel iska dhiga qunsuliyadda si ay howshan u gutaan, waxaad leedahay dhowr beddelaad, mid ka mid ah ayaa ah Stacer.
Qodobkaan waxaad ku baran doontaa sida Sida loo wanaajiyo Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo derivatives, si dhakhso leh oo dareen leh, waxaad sidoo kale la wareegi doontaa codsiyada ka bilaabmaya nidaamkaaga qalliinka, waxaadna awoodi doontaa inaad doorato barnaamijyada aad rabto inaad sii wadato rakibidda.
1 Waa maxay Stacer?
2 Astaamaha Stacer
2.1 Screenshot shaashadda
2.1.1 Soo galitaanka Sudo
2.1.3 Nadiifinta Nidaamka
2.1.4 Barnaamijyada Bilowga
3 Sidee loo rakibaa Stacer?
3.1 Ku rakib Stacer on Debian Linux x86 iyo derivatives
3.2 Ku rakib Stacer on Debian Linux x64 iyo derivatives
3.3 Ka tirtiro Stacer
Waa maxay Stacer?
Stacer waa aalad il furan oo furan, oo ay sameeyeen Oguzhan Inan, taas oo noo ogolaaneysa inaan eegno astaamaha qalabkayaga, aan hagaajino oo nadiifino qeybintayada, abaabulno oo aan xaqiijino adeegyada iyo barnaamijyada socda, iyo waliba awood u lahaanshaha ka saarida xirmooyinka aan tilmaamno.
Stacer Waxay leedahay qaab dhexdhexaad ah oo fudud, abaabulan oo soo jiidasho leh, oo lagula taliyay dadka isticmaala bilowga ah iyo kuwa doonaya in ay sameeyaan hawlo aan inta badan ka qabanno qunsuliyadda kana soo jeeda istiraatiijiyad muuqaal ah oo aad u fiican.
Waa qalab bilaash ah oo bilaash ah.
Interface dareen leh oo soo jiidasho leh.
U oggolow marinka sudo.
Waxay leedahay Dashboard tilmaamaya adeegsiga processor-keena, Memory, Disk iyo macluumaadka guud ee qalabkayaga iyo nidaamkayaga hawlgalka.
Suurtagalnimada in lagu baaro oo laga nadiifiyo feylasha laga helo Apt Caché, Crash Reports, System Logs, App Caché.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato barnaamijyada iyo adeegyada aad maamusho marka nidaamkaaga hawlgalka uu bilowdo.
Waxay na siineysaa shaqeyn si aan dhaqaajino oo u joojino adeegyada si dhakhso leh oo fudud.
Ku qalabeysan yahay furaha xirmada hal-guji oo aad u fiican.
Soo galitaanka Sudo
Sidee loo rakibaa Stacer?
Ku rakib Stacer on Debian Linux x86 iyo derivatives
download stacer_1.0.0_i386.deb ka Stacer wuxuu sii daayaa bogga. Hubi inaad rakibtay nooca ugu dambeeyay
Orod sudo dpkg --install stacer_1.0.0_i386.deb galka aad ka soo degsatay xirmada.
Tag buuga cd/usr/share/stacer/ oo orod ./Stacer
Ku rakib Stacer on Debian Linux x64 iyo derivatives
Soo dejiso stacer_1.0.0_amd64.deb ka yimid Stacer wuxuu sii daayaa bogga. Hubi inaad rakibtay nooca ugu dambeeyay.
Orod sudo dpkg --install stacer_1.0.0_amd64.deb galka aad ka soo degsatay xirmada.
Haddii aad rabto inaad ku darto arjiga meeniska wax qeybintaada, waa inaad sameysato feyl .desktopen /home/$USER/.local/share/applications dhigida waxyaabaha soo socda (beddel galka kan u dhigma):
Ka tirtiro Stacer
Stacer Waa aalad si caddaalad ah wax ku ool ah, u fududahay in la rakibo, oo leh isdhexgal dareen leh oo ay ku jiraan dhowr astaamood oo aan dhammaanteen dooneyno inaan mar uun u adeegsanno. Waxaan rajeyneynaa inaad ka faa'iideysan doontid oo waxaan sugeynaa faallooyinkaaga iyo aragtidaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo wanaajiyo Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo waxyaabaha laga helo Stacer
duufaan duufaanta.theli dijo
Waxaan u maleynayaa inaan ku harnay "sidee". Marka laga soo tago tilmaamaha rakibaadda / rakibaadda, shaashado badan laakiin laakiin wax yar oo kooban oo ku saabsan tallaabooyinka la qaadayo, sida adeegyadooda in lagu joojiyo qaabeynta warshad si si sax ah loogu "hagaajiyo" nidaamka.
Jawaab ku sii qorista duufaanka.of.theli
Waxaan kaaga tagayaa dhowr maqaal oo blog ah oo kaa caawin kara si aad ufiican
Si la mid ah haddii aad u tagto xiriiriye soo socda https://blog.desdelinux.net/?s=optimizar waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo ku saabsan. Qalabku wuxuu ku siinayaa suurtagalnimada inaad ku sameyso taxane tallaabooyin garaaf ahaan ah
Salaan kadib, waxaan idiinka tagey talo yar:
Iska ilaali inaad ku sameysatid boosteejo waxyaabo aan caddayn oo aan waxtar lahayn. Malaayiin qoraallo nuucaan ah ayaa horeyba u jiray, Maaddaama Linux ay tahay goob tixraac u ah isticmaaleyaal badan oo Linux ah, waxaa jira waxyaabo badan oo ku yaal boggan oo loo isticmaali karo tan, way kuu fiicantahay inaad ka dhigto iyaga oo ku jira liis deg deg ah intii aad dib u habeyn lahayd giraangirta.
Waa dhif iyo naadir inaad u aragto inaysan waxtar badan lahayn, markii dhowr qof ay billaabeen inay adeegsadaan maxaa yeelay waxay si fudud ugu fududeynaysaa uguna raaxeysaneysaa iyaga inay yeeshaan googo'yaal ay ku sameynayaan waxyaabaha qaarkood terminalka. Aad baad ugu mahadsantahay taladaada, inkasta oo aanaan dib u cusbooneysiineynin shaagagga, waxaan kaliya soo bandhigeynaa qalab kuu oggolaanaya inaad ku fuliso ficilada qaarkood Linux.
Liisasku horey ayey u jireen, hadda waxaan ku dareynaa oo sameyneynaa qalab cusub oo la yaqaan.
Waqtigayga ayaan iska lumiyay, wax aan gacanta lagu qaban karin aqoon dhexdhexaad ah
Runtii waa wax gacanta lagu qaban karo si fudud, waxaan si cad ugu sheegayaa hordhaca maqaalka
Stacer wuxuu leeyahay qaab dhexdhexaad ah oo fudud, abaabulan oo soo jiidasho leh, oo lagula taliyay dadka isticmaala bilowga ah iyo kuwa doonaya inay sameeyaan hawlo aan inta badan ka qabanno qunsuliyada kana soo jeeda istiraatiijiyad muuqaal ah oo aad u fiican.
Caadiga ah "smart" ee ku faano inuu waxbadan ogaado maxaa yeelay amarro badan ayaa la barto markaan helno ikhtiyaarka aan wax walba ugu qaban karno si ka fudud. Waxaad arki kartaa in dadka qaar, xisaabinta ay tahay inay ahaato sidii 80-maadkii.
Waad ku mahadsan tahay Stacer tan, wax ku ool u ah kuwa naga mid ah ee aan haysan waqti ay ku bartaan amarrada iyo sheekooyinka oo doorbida inay waqtigeena uga isticmaalaan waxyaabo kale.
Macluumaadka waa la qadarinayaa!.
Aad baad ugu mahadsantahay ka tagida dareenkaaga.
Waad salaaman tahay, qalab aad u fiican, habka, sidee u yihiin ragga caqliga badan ee ka jawaabaya iyagoo doonaya inay sharaf dhac ku sameeyaan shaqadaada oo aanad waxba ku darsan Waxaan idhi, qalab weyn iyo maqaal wanaagsan.
Waa wax caadi ah, waxaa jira kumanaan, laakiin sida wax walba oo nolosha ka mid ah, waa in wax loo qabtaa kuwa iyaga qaddarinaya, inta soo hartay waa inaan haysannaa wax muhiimad leh, kuwaas oo waqti u qaata inay na dhaleeceeyaan.
Linux midkoodna tan lagama maarmaan ma aha, uma baahnid inaad wax uun hagaajiso, ama aad nadiifiso waxna, ha ahaato qunsuliyadda ama garaafka garaafka, Linux marwalba sidoo kale wey tagi doontaa
Ku jawaab Noacefalta
Adiga ayaa ku jira niyad wanaagsan, waa su'aal, laakiin nasiib daro ma jiro OS ka xor ah "dembiga", in kastoo ay tahay inaan u aqoonsanno OS-ga aan jecel nahay caafimaadka wanaagsan ee uu haysto iyo daryeelka caafimaad ee yar ee uu u baahan yahay.
Waxaa jira laba nooc oo dad ah, kuwa iskudaya qaab ama qaab kale inay ku caawiyaan kuwa kale, iyo kuwa had iyo jeer dhaleeceeya kan hore. Kulligeen ma nihin guruudda Linux. Kuweena aduunkan ka bilaabaya, kuwani waa wararka aan marwalba dooneyno inaan maqalno, sida halkudhigga ubutnu u leeyahay, "Linux dadka". Macluumaadka waa la qadarinayaa
Aad baad u mahadsantahay, waxaan rajaynayaa inaan markasta noqdo nooca dadka caawiya dadka kale 🙂
Maqaal wanaagsan, anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwa doorbidaya in aan la isticmaalin qalabka wax lagu xiro, in kasta oo aan aqoonsanahay sida ay u taabanayso, waxaan doorbidaa qaabdhismeedka garaafka mana aanan aqoonin yutiilitiyadaan.
Wax ku oolnimada uu qunsulku na siinayo waa mid aad muhiim u ah, laakiin cidna uma ahan qarsoodi inay jiraan tiro badan oo adeegsadayaal ah oo doorbidaya inay wax u qabtaan si garaaf ahaan iyo qaab fudud ah, kooxdaas dadka ahi waxay matalaan boqolkiiba in badan oo ka mid ah dadka isticmaala Nidaamyada. Hawlaha Desktop waana inaan si fiican u gaarno.
Soo kabasho Fudud dijo
Maqaal wanaagsan. Qalabka iswaafajinta ayaa aad u wanaagsan. Waxaan ku tijaabin doonaa Linux Mint.
Kajawaab Si Aad Uhesho Fudud
Waxaan ku tijaabiyay Linux MInt
Waxaan dareemayaa muuqaal u eg ubuntu tweak ama bleachbit.
Haa, laga yaabee in shaqooyinku isku mid yihiin mararka qaarkood ... Waxaan jeclahay isdhexgalka hagaagsan ee Staker
Hagaag, waan ku faraxsanahay barnaamijyadan GUI iyo kuwa noo keena. Aniguna waxaan taaganahay daboolka kuwa culus ee isku darsama kuwaas oo ku dhib qaba in barnaamijyada GUI lala baxo. Haye, hadaadan ka helin, ha u isticmaalin oo dhibka ka jooji.
Ku jawaab VivaGUI
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga, LInux waxaa loogu talagalay dhadhanka iyo midabada oo dhan.
Hagaag, aan aragno markii dab-damiyaashaas anti-GUI ay ogaadaan oo ay kaligood nooga baxaan "dhadhankeena iyo midabkeena". Waxay u dhaqmaan sidii qof ku qasbay inay xidhaan!
Galab wanaagsan, waxaan isku dayay inaan ku rakibo Ubuntu 16.04 laakiin sida muuqata ma ahan, waxaan ka sameeyay qunsulka iyo sidoo kale xarunta softiweerka, laakiin ma shaqeyso:
U diyaar garowga inaad kala baxdo stacer_1.0.0_amd64.deb…
Furitaanka stacer (1.0.0-1) in ka badan (1.0.0-1) ...
Dejinta stacer (1.0.0-1) ...
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya bamfdaemon (0.5.3 ~ bzr0 + 16.04.20160824-0ubuntu1) ...
Dib u dhiska /usr/share/applications/bamf-2.index…
Ka shaqeynta kicinta gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya ee sheyga desktop-file-ka (0.22-1ubuntu5) ...
Ka shaqeynta kicinta kicinta mime-ka (3.59ubuntu1) ...
$ sii daran
stacer: amar lama helin
Tag cinwaanka cd / usr / share / stacer / directory oo orod ./Stacer ... Ama kaliya ku qor waxyaabaha soo socda galka /usr/share/stacer/./Stacer
Xaaladdayda faylka / usr / share / stacer ma muuqdo, sidoo kale waxaan ku raadiyaa aniga oo gacanta ku haya nemo iyo waxba.
Waad salaaman tahay @ HO2Gi ma ii sheegi kartaa qaybinta iyo nooca aad rakibayso si aad u aragto haddii aan ku soo koobi karo seenyada ..
Luigys: Waad ku mahadsantahay inaad iftiin yar u keento hagaajinta nidaamyadeena hawlgalka.
Hadda waxaan xasuustaa weedh ka timid Rasuulkeenna, José Martí, oo in ka badan ama ka yar ay leedahay:
«The Sun, boqorkayaga xiddigta, ayaa leh dhibco. Ma aha kaamil ah. Mahadiyayaashu iftiinka ayay arkaan. Kii gaaloobay wuxuu arkaa uun wasakhda.
Oo eeg sida ay u adag tahay inaad aragto dhibcaha qorraxda hadaad ka eegto xagga hore!
Sidee weedhu si fiican u dhahdaa:
"EEYU ha u ooyaan Sancho saaxiib, waa calaamad muujinaysa inaan marayno."
Salaan. Waan soo dajiyay laakiin waxaan ku rakibay rakibayaal u yimaada xirmooyinka DEB, dhammaantood waa wanaagsan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan maamulo oo qalad ayaan ku helayaa
Sawirka ayaan kaaga tagay, horay ayaan kaaga mahadcelinayaa caawimaadda
Ka soo wado qunsulka habka soo socda oo ii sheeg sida ay wax u socdaan:
Waa inuu jiraa wax ka qaldan toobiye. Waxaad isku dayi kartaa inaad mid cusub ka sameysato tifaftiraha qoraalka jira. Haddii aad rabto inaad sameyso, halkan waa lambarka:
Magaca = Stacer
Astaamo = stacer
Qaybta "Icon" waxaad ku tilmaami kartaa waddo astaamo kale oo kasta oo aad jeceshahay (tusaale ahaan / home/jesus/cepillo.png).
Wax kale: Waxaan ilaaway inaad ku keydiso feylka kordhinta .desktop markaad dhameyso tifaftirka.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, caawimaad kasta oo loo fidiyo adeegsadayaasha aasaasiga ah si wanaagsan ayaa loo qadariyo, salaan
Ku jawaab saulvs
Waxay ii sheegaysaa inay jiraan ku-tiirsanaan aan la fulin karin sidaa darteed waxaan isku dayay inaan ka saaro laakiin oh la yaab ayaan helay oo waan furay waana la isticmaali karaa ... Ma aqaano in fariintu caadi ahayd ama maxay tahay. Waxaan isticmaalaa Xubuntu 16.04.
Salaan iyo mahadsanid inaad u roontihiin kuwa naga cusub ee ku cusub GNU / Linux si nolosheenu u fududaato (maxaa yeelay runtii waxaan ka shakisanahay inaan waqti badan ku qaato GNU / Linux si aan khabiir ugu noqdo). Waxaan si daacad ah u arkaa dadka adeegsada Linux inay xiiseeyaan in Windows uu kaligiis xakameynayo suuqa kombuyuutarka, laakiin aragtida kuwa ku dhaleeceynaya ayaa ah in aan loo oggolaan qof kale inuu soo galo ...
Waad salaaman tahay! Aad u xiiso badan!
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii codsigan kaliya uu u shaqeeyo Ubuntu iyo noocyo kale ama sidoo kale qeybinta kale.